Abaabulka iyo Diwaangalinta Waxbarashada Wardheer - Cakaara News
Abaabulka iyo Diwaangalinta Waxbarashada Wardheer
Wardheer(Cakaaranews) Axad, 18ka September 2016. Sida lawada ogsoon yahay waxbarashadu waa furaha lagu xaqiijin karo horumar waara islamarkaana lagula dagaalamo saboolnimada.
Hadaba iyadoo taa laga duulayo ayaa waxay xukuumada DDSI ay ahmiyad wayn siisay waxbarashada maadaama ay gundhig utahay yoolka uu dalku kuhigsanayo kamid noqoshada wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay.
Sidaadarteed, ayaa waxaa xarunta gobolka doolo ee magaalada wardheer kadhacay shirwaynihii abaabulka iyo diwaangalinta waxbarashada oo ay kasoo qaybgaleen maamulka degmada wardheer oo uu hor-socdo madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada wardheer mudane Cabdikhadar Maxamed Mursal, madaxa xafiiska arimaha haweenka marwo Xamdi Xuseen Cabdi, teamka waxbarashada heer deegaan oo uu horkacayo mudane Maxamed Yuusuf Xuseen iyo dhamaan qaybaha kaladuwan ee bulshada.
Mas’uuliyiintan ayaa bulshada kalahadashay in qabalee walba oo kamid ah degmada guri kaguri loo booqdo lagana soo diwaangaliyo caruurta da’da waxbarashada gaadhay ee 4 ilaa 6 sano loona diro dugsiyada fasalka 0 iyo fasalada caruurtu wax isbarayso. Sidoo kale, in caruurta da’doodu udhaxayso 7 ilaa 14 sano iyo 15 ilaa 18 ee cusub iyo kuwa luux-tuurka ahba in loo diro dugsisyada islamarkaana ladiwaangaliyo waxbarashada dadka waa wayn.
Dhankoodana, bulshada ayaa bogaadisay shirwaynahan ugana mahadcelisay xukuumada islamarkaana balan-qaaday inay siday tahay ufulinayaan oo ay da’ yar iyo tu waynba kaqayb qaadanayaan waxbarashada.